အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် သာသနာကွယ်ခြင်း အကြောင်းရင်း	Posted on August 28, 2009	by mettayate ဒီပို့စ်တွင် မျက်ရည်မကျခင်သိစေချင်စာအုပ်မှ သာသနာကွယ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကို မပြင်မဆင်ဘဲ တင်ပြပေးထားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာကို နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ငါးရာကျော် ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း ယခုအချိန်မှာ ဗုဒ္ဓတရားတော်များမှာ မှေးမှိန်နေပြီး ဗြဟ္မဏ၀ါဒ၊ ၀ိဇ္ဇာ စသည့်လောကီအတတ်ပညာများပါ ကြောက်ခမန်းလီလီ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမှာ ကျင့်သုံးယုံကြည်လာသောကြောင့် သာသနာဟာမှေးမှိန်လို့ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးပါးဖြစ်နေပါတယ်။ အဓိကကြောင်းရင်းတွေကတော့ တစ်ချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားပြန့်ပွားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ သာသနာပျောက်ကွယ်လိုမျိုး ယခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဟိန္ဒူ၊ ဗြဟ္မဏတို့ အတွင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဟူသည် ဗုဒ္ဓပေါ်ထွန်းလာသည်နှင့် သဗ္ဗေဓမ္မာ အနတ္တာ တရားအားလုံး ကိုယ်မပိုင် စိုးမရ အနတ္တဟူ၍ ဟောကြားလိုက်ရာ အတ္တကိုအမှီပြု၍ အညွန်းခူးစားရသော ဟိန္ဒူ ဗြဟ္မဏတို့ စားပေါက်ပိတ်ခဲ့ရသည်။ တဖန် သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးလက်ထက်တွင် သတ္တ၀ါများကို သတ်ဖြတ်၍ ယဇ်မပူဇော်ရ ဟု ဥပဒေအမိန့်ထုတ်ပြန်ရာ ယဇ်ပွဲကိုမှီ၍ ဆီစိုခဲ့ရသော ဟိန္ဒူ၊ ဗြဟ္မဏတို့ နှုတ်ခမ်းမှာ ခြောက်သွေ့ခဲ့ကြရပြန်သည်။
This entry was posted in မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← သင်္ဂါယနာတင်ခြင်း